Ciraaq: Ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa dawladda oo ku dagaalamay Kirkuuk - BBC News Somali
Ciraaq: Ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa dawladda oo ku dagaalamay Kirkuuk
Maalmo uun ka dib markii ciidanka Ciraaq la wareegay gacan ku haynta goobo lagu muransanyahay, ayaa waxa ciidamada Kurdiyiinta iyo kuwa Ciraaq foodda isku dareen woqooyiga magaalada Kirkuuk.
Wariye ka tirsan BBC-da oo goobta jooga ayaa sheegay in la isku ridayey baasuukeyaal, artilariga iyo boobeyaasha culus dagaalkaa ka dhacay Alton Kupri.
Degmadani waa goobtii ugu dambaysay ee gobolka Kirkuuk ee ay weli gacanta ku hayaan dagaalyahannada Kurdiyiinta ee Peshmerga.
Ciidamada Ciraaq ayaa todobaadkan qabsaday dhul ballaadhan oo ay hore gacanta ugu hayeen Kurdiyiintu ilaa 2014-kii.
Milatariga Ciraaq iyo maleeshiyaad taageeraya ayaa guluf ay qaadeen xoogagii Kurdiyiinta dib ugu riixay goobo rasmi ahaan dawladdu ugu aqoonsantahay in ay ka tirsanyihiin gobolka ismaamul hoosaadka Kurdistan ee Ciqaar.
Gobolkaa Kirkuuk ee saliida hodanka ku ah, ayaa ay ku taalaa magaalada Kirkuuk oo ay deganyihiin dadka kala isir ah, labada dhinac oo kala ah dawladda dhexe ee Ciraaq iyo ismaamul hoosaadka Kurdistan labaduba way sheegtaan.
Ra'isal wasaaraha Ciraaq, Xaydar Al-Cabaadi, ayaa amar ku siiyey ciidanka in ay hawlgalkan fuliyaan ka dib markii xukuumad goboleedka Kurdistan ay qabatay afti dadka badankoodu ku taageereen madaxbannaani ay ka qaataan Ciraaq. Cabaadi na wuxu ku tilmaamay aftidaa in ay ahayd mid sharci darro ah.